Download-Manager | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Internet Download Manager 6.23 Build 21 Final Full Version
ဒီနေ့ Internet Download Manager မှာ နောက်ဆုံး Update လေးဖြစ်တဲ့ 6.23 Build 21 Final ထပ်ထွက် လာလို့ Full Version လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
IDM တင်သာ မက တခြား Software Update တွေ ကိုလည်း ကျွန်တော် Update ဖြစ်တိုင်း နောက် မကျအောင် တင် ပေးသွားမှာပါ။
အခုလည်း IDM ကို Install လုပ်ရတာ အဆင်မပြေ သူများ အတွက် ဒီလင့်ခ်လေး မှာ ရှင်းပြပေး ထားပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 13.5 MB ပဲ ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက် ပါဗျာ။
Original link - http://www.nayminnmaung.com/2015/08/internet-download-manager-623-build-21.html
Internet Download Manager v6.23 Build 14 + Patch (9-July)
Internet Download Manager နောက်ဆုံးထွက် Version လေး တင်ပေး လိုက်ပါ တယ်ဗျာ။ 9-July ကမှ ထွက်လာတဲ့ Version အသစ်လေးပါ။
IDM ဆိုတာက အင်တာနက် အသုံးပြု သူများနဲ့ Download ဆွဲသူများ အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါ တာကြောင့် ဒေါင်းယူ ထားစေချင် ပါတယ်။ IDM ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Full Version ဖြစ်ရန် အတွက် Patch File ကိုပါ ထည့်သွင်း ပေးထား ပါတယ်။
အင်စတော လုပ်ပြီး တာနဲ့ ကွန်ပြူတာရဲ့ ညာဖက်ထောင့် အောက်ဆုံးမှာ ပေါ်နေတဲ့ IDM launch Icon လေးကို Right Click နှိပ်ပြီး Exit နဲ့ထွက်ထား ပေးပါ။ ပြီးသား ရင်တော့ Patch File ကို Install လုပ်ထားတဲ့ C/Program/Internet Download Manager ဖိုင်ထဲမှာ ကူးထည့် ပေးလိုက် ပါ။
ပြီးသွားရင်တော့ Patch File လေးကို Double Click နှိပ်ပြီး Run ပေး လိုက်ပြီး Patch လေးကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ Patch Done ဆိုတာလေး ပေါ်လာပါ လိမ့်မယ်။ ဒါဆို ရင်တော့ Full Version အဖြစ် သုံးပြု နိုင်ပါပြီ။
Patch File နှိပ်နေ တုန်းမှာ IDM ကို ပိတ်ထား ရပါမယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, July 10, 2015 1 comment:
ကလစ် နှစ်ချက်နဲ့ Full Versin အဖြစ် အမြဲ သုံးနိုင်မဲ့ Internet Download Manager 6.23 Build 11 (Latest Version)
ဘာကီးမှ ထည့်ဘို့ မလိုတဲ့ နောက်ဆုံးထွက် IDM ပါ.... Patch, Crack မသုံး တတ်တဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်..
ဒီ Version ကို အသုံး ပြုမယ် ဆိုရင်တော့ အရင် ရှိပြီးသား IDM ကို Uninstall လုပ်ပစ်ပါ...
ပြီးရင် စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ ...
ပြီးတော့မှ ခုဒေါင်းထားတဲ့ IDM 6.23 B11 FUll CraCked ဖိုင်ကို ကလစ် နှစ်ချက်နဲ့ Install လုပ်ပေး လိုက်ပါ...။ သူ့ဖာသာသူ Install လုပ်သွား ပါလိမ့်မယ်...။
How to install IDM 6.23 B11?
1-Uninstall old version – reboot your Windows.
2-Unrar and run exe file (Run as administrator).
3-Have fun! and share it with your friends.
Internet Download Manager v6.23 Build 10 + Full Patch
Internet Download Manager နောက်ဆုံးထွက် Version လေး တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ 2-April ကမှ ထွက်လာ တဲ့ Version အသစ် လေးပါ။ IDM ဆိုတာက အင်တာနက် အသုံးပြု သူများနဲ့ Download ဆွဲသူများ အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါ တာကြောင့် ဒေါင်းယူ ထားစေ ချင်ပါတယ်ဗျာ။ IDM ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း Full Version ဖြစ်ရန် အတွက် Patch File ကိုပါ ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။
အင်စတော လုပ်ပြီးတာနဲ့ ကွန်ပြူတာရဲ့ ညာဖက်ထောင့် အောက်ဆုံးမှာ ပေါ်နေတဲ့ IDM launch Icon လေးကို Right Click နှိပ်ပြီး Exit နဲ့ ထွက်ထား ပေးပါ။
ပြီးသွား ရင်တော့ Patch File ကို Install လုပ်ထားတဲ့ C/Program/Internet Download Manager ဖိုင်ထဲမှာ ကူးထည့် ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးသွား ရင်တော့ Patch File လေးကို Double Click နှိပ်ပြီး Run ပေး လိုက်တာနဲ့ Full Version အဖြစ် သုံးပြုနိုင် ပါပြီဗျာ။
Patch File နှိပ်နေ တုန်းမှာ IDM ကိုပိတ်ထား ရပါ မယ်ဗျာ။
Full Version မလုပ်တတ် သူများအောက်မှာ ပုံနှင့်တကွ တဆင့်ခြင်း စီ ရှင်းပြ ထား ပါတယ်ဗျာ။
Fast Facebook Video Downloader v1.1.6 apk
Android ဖုန်း ကိုင်ထားသော ဘော်ဒါတို့ အတွက် အရမ်းကို အထောက် အကူပြုတဲ့ Downloader ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီကောင်းလေး ကတော့ Only Facebook ထဲက Video တွေကို ဒေါင်းလုပ် ရတဲ့ application တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook က Video တွေကို ဒေါင်းရန် အခက်ခဲ ဖြစ်နေတဲ့ သူများ အတွက် ကတော့ ဒီကောင်းလေးနဲ့ ဆိုရင် တော်တော် အဆင်ပြေ သွားလိမ့် မယ်နော်။ ဒီကောင်း ဒေါင်းလုပ်ပုံ ကိုတော့ အောက်မှာ ပုံတွေနဲ့ ပြထားပေး ပါတယ်။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 9.39MB ဖြစ်ပြီး Android OS 2.3 အထက်တွေမှာ အသုံးပြု နိုင် ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, March 27, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Download-Manager, Facebook, Phone Application
4K Video Downloader 3.5.1.1625 With Patch Full Version Size (22.1MB)
ကွန်ပျူတာမှာ YouTube က Video တွေကို ဒေါင်းယူ နိုင်မည့် 4K Video Downloader ကို တင်ပေး လိုက် ပါတယ်။
YouTube က ကိုယ် နှစ်သက်သော အရာ များကို MP4, MKV, M4A, MP3, FLV, 3G, စသည့် Format အမျိုး အစား တွေကို ဒေါင်းလို့ ရနိုင် ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဗီဒီယို တွေကို ဒေါင်းယူ ချင်သူများ ဆော့ဝဲကို အောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်နော်။
ကဏ္ဍ Download-Manager, Video-software
Internet Download Manager 6.23 Build3Full Version : 5.92 Mb
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဆွေကြီး Internet Download Manager ကတော့ 2.3.2015 ရက်နေ့ မှာ 6.23 Build3ကို ထုတ်ပေး လိုက်ပါပြီ..
မိတ်ဆွေတို့ အတွက် Full Version ဖြစ်ဖို့ Trial Reset ဖိုင်နဲ့ တကွ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်.. Setup ကို Install လုပ်ပါ.. ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက် aအာက်ထောင့် နားက Tray ထဲမှာ IDM icon လေး ရှိနေရင် ညာကလစ် ထောက်ပြီး exit ကိုနှိပ်ပါ.. ပေးထားတဲ့ Trial Reset ကို Run ပြီး Rest Trial လုပ်ပါ..
ပြီးရင် Register လုပ်ပါ.. ပုံနဲ့ တကွ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်..
Home Page : http://www.internetdownloadmanager.com
Internet Download Manager 6.23 Setup : 5.92 Mb ကို အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
ဖုန်းထဲ ကနေ ဒေါင်းချင်ရာ ဒေါင်းယူ နိုင်တဲ့ Advanced Download Manager Pro v4.0.5 apk
Android phone / Tablet ကိုင်ဆောင် သူတွေ အတွက် မရှိ မဖြစ် လိုအပ်သော Advanced Download Manager တင်ပေး လိုက် ပါတယ်။ ဖုန်း နဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြု သူများ အတွက် ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေ စေမယ့် app လေး တခု ပါ။ မိမိ စိတ်ကြိုက် Link ကို ရိုက်ထည့် ပြီး ဒေါင်းနိုင် သလို၊ ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရမည့် အချိန် တွင်လည်း ဒီ app လေးက Autorun ပေး ပါလိမ့်မယ်။
ဒီကောင်လေး ကတော့ ဖုန်း Tablet ထဲတွင် 2.1 အထက်ကို သုံးနိုင် ပါတယ်ဗျာ ။
ကဏ္ဍ Android, Download-Manager, Phone Application
Internet Download Manager 6.23 + Full Crack (22-Feb)
Internet Download Manager နောက်ဆုံး ထွက် Version လေး တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။
22-Feb ကမှ ထွက်လာ တဲ့ Version အသစ်လေးပါ။
IDM ဆိုတာက အင်တာနက် အသုံးပြု သူများနဲ့ Download ဆွဲသူများ အတွက် မရှိမဖြစ်
အရေးပါ တာကြောင့် ဒေါင်းယူ ထားစေချင်ပါတယ်။ IDM ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း Full Version
ဖြစ်ရန် အတွက် Crack File ကိုပါ ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။
အင်စတော လုပ်ပြီးတာနဲ့ ကွန်ပြူတာရဲ့ ညာဖက်ထောင့် အောက်ဆုံးမှာ ပေါ်နေတဲ့ IDM
launch Icon လေးကို Right Click နှိပ်ပြီး Exit နဲ့ ထွက်ထား ပေးပါ။ ပြီးသွား ရင်တော့
Crack File ကို Install လုပ်ထားတဲ့ C/Program/Internet Download Manager ဖိုင်ထဲမှာ
ကူးထည့် ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ Crack File လေးကို Double Click နှိပ်ပြီး Run
ပေး လိုက်တာနဲ့ Full Version အဖြစ် သုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
သတိ ။။ Crack File နှိပ်နေ တုန်းမှာ IDM ကို ပိတ်ထား ရပါမယ်။
Internet Download Manager v6.22 Build 1 + Crack & Key
Internet Download Manager နောက်ဆုံးထွက် Version လေး တင်ပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ 19-Feb
မနေ့ ကမှ ထွက်လာ တဲ့ Version အသစ်လေးပါ။ IDM ဆိုတာက အင်တာနက်အသုံးပြုသူများနဲ့
Download ဆွဲသူများ အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါ တာကြောင့် ဒေါင်းယူ ထားစေချင် ပါတယ်ဗျာ။
IDM ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Full Version ဖြစ်ရန် အတွက် Crack File ကိုပါ ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။
အင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့ Crack ဖိုင်လေးကို Install လုပ်ထားတဲ့ C/Program/Internet Download
Manager ဖိုင်ထဲမှာ ကူးထည့်ပေး လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင်တော့ Crack File လေးကို Double Click နှိပ်
ပေး လိုက်တာနဲ့ Successful ဆိုပြီးပေါ်လာရင်တော့ Full Version အဖြစ် သုံးပြုနိုင်ပါပြီဗျာ။
Crack File မ နှိပ် ခင်မှာ IDM ကို Exit နဲ့ ထွက်ထား ရပါမယ်။
Download Speed ကို 400% မြှင့် ဒေါင်းယူနိုင်တဲ့ Internet Download Accelerator v6.1.1.1442
Dwonload Accelerator Plus ဆိုတာ ကတော့ အင်တာနက် ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ မိမိလိုချင်တဲ့ Software,
Video, Music, Application စတာ တွေကို မြန်ဆန်စွာ Download ဆွဲယူ ပေးနိုင်တဲ့ Software
အများကတော့ သိကြမှာပါ။ မသိသေးသူများ အတွက်သာ ရှင်းပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ IDM နဲ့
လုပ်ဆောင်ချက် အတူ တူပါဘဲ။ Dwonload Accelerator Plus ကတော့ Internet Download
Speed ကို 400% အထိ မြန်ဆန်စွာ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲပေးနိုင် တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
YouTube, Facebook နဲ့ အခြားဆိုဒ်တွေက Movies တွေ Music များ ကိုလည်း Automatically
Download ဆွဲပေးနိုင် ပါတယ်ဗျာ။ IDM ထက်ကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ လိုင်စင်ပြသနာမရှိ
ပါဘူး။ IDM မှာတော့ ခဏခဏ ကြားနေရတာ လိုင်စင် အဆင် မပြေတာပါ။ အခု Dwonload
Accelerator Plus မှာတော့ Full Version အသုံးပြုနိုင်အောင် Serial Key & Keygen File
ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ဒီထက်ပိုပြီး အသေးစိတ် သိချင်ရင်တော့ အောက် မှာ ဆက်